Nguva yekuverenga: 10 maminitsi
Tisati kutanga, regai mufananidzo wacho chaizvo nei Europe yakanakisisa noruzivo Via chitima kufamba- shure kwezvose, ino rave richigarwa kwemakore zvemakore, izvo zvinoreva kwezvivako zvayo iri kazhinji zvikuru dzakabudirira. Other modes chokufambisa dziripo nyore, asi pane chimwe chinhu chinofanira ati huru kukwezva chitima kufamba. Izvi zvinonyanya kuitika kune vekutanga-nguva vafambi, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Izvi zvakasiyana chaizvo muEurope dzendege, apo Minimum Kusvika nguva yako pamberi maendero iri maawa anenge maviri, uye imi Unopedza nguva yakawedzerwa uye mari pakufamba kuenda kwaaishanda kuti yendege nzvimbo.
Sezvambotaurwa, zvose Eurostar matikiti zvinosanganisira zvidimbu zviviri kubva mukwende uye bhegi. Kana uri kuunza yakawanda mukwende, iwe unogona zvakare kusarudza yeakakwira kirasi tikiti iyo inokutendera iwe kuti uunze mamwe mabhegi. Mukupesana ne, bhajeti vendege anogona akamurairawo zvishoma nokuda kwavo kutanga bookings, asi bhegi mari yechikoro uye chigaro yakasarurwa mhosva nokukurumidza wedzera kukwira.
Tikiti mitengo nokuti rwendo urwu zvinoodza-chinja zvizhinji, saka isu dzinorumbidza kutenga matikiti mangoti unokwanisa. kazhinji kutaura, matikiti izvi kuenda Sale mitatu pachine, kunyange zvichienderana mwaka unogona kuwana navo mwedzi mitanhatu pachine. Tinoratidza kushandisa yedu Website kuwana uye bhuku rako chitima matikiti, iyo inongotsvaga yega zvese zviripo kuti uwane iwe mutengo unogoneka, avimbiswa.
The Eurostar chitima unoshanda-kirasi matatu cabins, zvichienderana bhajeti yenyu. Nokuti avo kungotsvaka kuti panzvimbo imwe neimwe, yechipiri-kirasi matikiti ndiwo ako akanyanya kuita sarudzo. Vaya bhizimisi kufamba anogona pachinzvimbo vanosarudza Standard Premier kana Business Premier tikiti, zvose hunoita kuti kugara yomuzana mukirasi Coaches zvekudya panguva rwendo rwenyu, saka ngatidzidzei zvishoma nezveLondon kuenda kuParis matikiti ezvitima:
2 zvidimbu zvemikwende uye bhegi rimwe rakabatanidzwa
3 zvidimbu zvemikwende uye bhegi rimwe rakabatanidzwa
Free cancellations uye mapfumo exchanges kusvikira 60 Mazuva rokubuda pamusoro nzira dzose pakati UK, Furanzi, uye Belgium.
Sezvo taona anotaurwa pamberi, Pricing kunoenderana dzenyu mazuva okufambisa, saka iwe unenge uchida bhuku kamwe Kuwanikwa anovhura. Kana iwe ukaverenga zvakakwana zvakakwana pamberi, unenge uchitsvaga kuripira pamusoro 55 madhora imwe-nzira, kana 90 Dollars kumativi-rwendo. Waiting kusvikira yapera kutyaira mitengo denga-soro, pamwe mari zvinenge doubling zvapedzisira ukatenga tikiti yako. Izvi ichokwadi vose kumativi-rwendo uye imwe-nzira matikiti.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Eurostar haiwanikwe kune avo vese vanobata njanji kupfuura, saka kana iwe uchida kuita rwuno rwendo rwunokwezva uye kudhura, kutenga rako chitima tikiti pachine. Unogona kuwana nezvitima matikiti paIndaneti pane Websites siyana, kunyange chitima tikiti mitengo kunogona inflated zvichienzaniswa Save A Train.
Zvichienderana yokufamba kirasi yako, iwe unenge uchida kusvika nokubviswa kwako chiteshi kanenge 40-60 maminetsi chitima chisati chasimuka kubva kuLondon kuenda kuParis. Kana iwe wakatsvaga yekutanga-kirasi Bhizinesi Premier tikiti kubva kuLondon kuenda kuParis, uchava kuwana chete Lounge. zvimwe, pane zvitoro zhinji uye mumaresitorendi iripo kuti peruse. Vamwe vedu kufarira mumaresitorendi zvinosanganisira:
AMT Coffee – A kofi chitoro pamwe munzvimbo mbiri mukati nhepfenyuro. Rinopa dzakaitwa nemaoko zvinwiwa uye zvakazara compostable nemikombe, izvo zvinoita kuti nharaunda inyemwere.
Chop'd – A resitorendi utano-pfungwa, Chop'd inopa dzakasiyana masobho, salads, stews, uye inoputira marudzi ese evafambi.
Kamwe mundege, zvachose nguva kufamba kubva kuLondon kuti Paris ndiye anenge 2 maawa uye 16 maminitsi. Pamwe wako pre-kuenda kusvika, rwendo nguva yako yose ichava kumativi 3 maawa.
Sezvambotaurwa, pane WiFi yemahara iri mubhodhi, saka unogona kuramba nomwoyo Email wako nemagariro nevezvenhau zvinodiwa. Zvichienderana tikiti renyu, unogona musoro murairidzi dzokudyira, apo unogona kuwana chikafu, zvinwiwa, uye nezvikafu zvishoma. Kana uri vagere wokutanga-kirasi kabhini, zvokudya vachaitwa zvakananga chigaro chako.
Kamwe wasvikapo, uchava mumoyo peguta, pamwe vakawanda nzira zvokudya, zvitoro, uye zvinwiwa. Kana ukasarudza kusiya nhepfenyuro, uchawana pedyo Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. zvimwe, unofanira kungoti dzichidzungaira chero mirayiridzo kuwana zvimwe zvakanaka zvokudya nokumwa mu Europe.
The Eurostar anomhanya kazhinji, pamwe kusvikira 19 kusimuka pazuva zvichienderana mazororo uye kwevhiki. The chitima pazuva rokutanga paunobuda pa 05:40 uye anotora dzinokwana 2 maawa uye 37 maminitsi. Izvi Kazhinji mumwe yakachipa pashiri matikiti iripo, saka kana iwe hausati averse kuti ndichifumira mangwanani unogona kuponesa mari uye musoro panguva mambakwedza. Chimwe chakanakira ichi mangwanani maendero ndechokuti enyu kusvika nguva muParis ndiye 09:17, izvo zvinoreva une uzere zuva akakutungamirirai chero zvinhu unodawo kusarudza.
Disneyland Paris – Zvitima vanomhanya kanoverengeka pavhiki rose gore uye zuva nezuva panguva chikoro mazororo. Chiteshi chechitima chiri chaiko kunze kwekupinda kweDisneyland. The Rwendo zvinotora pasi 3 maawa inosvika.
Lyon, Avignon, uye muMarseilles- Mumazana gore chitima ukashanda kubva 1 kuti 5 Mazuva pavhiki, kunyangwe ichikanganiswa nemwaka saka ive shuwa kuti iri kumhanya kana iwe uchiida. It Anodzivisawo pana Lyon Part-Dieu chiteshi (4.75 maawa), Avignon TGV chiteshi (6 maawa), uye muMarseilles St Charles chiteshi (6.5 maawa).
Search Nzvimbo yedu bhuku matikiti vose Europe yepamwoyo dzokugara, kusanganisira Bherujiyamu, Itari, Siwizarendi, uye UK (kusanganisira London kuti Paris chitima pamwe Eurostar). kutsvaka kwedu injini yakagadzirirwa Chengetedza mari pamatikiti ese uye haisanganisira mari yekunyorera. Tinoita izvozvo nyore kuti kutenga nokubvuma akawanda nzira mubhadharo, kusanganisira kadhi, Giropay, iDeal, uye zvakawanda.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#garedunord #stpancras eurostar London Train Travel travelfrance travelparis ukra